Va Mutambara Vanoti Vaimbova Mumiriri weLybia Vakadzingwa Zviri Pamutemo
Gurukota rezvemaindasitiri, Va Welshman Ncube, vanoti nyaya yemumiriri we Libya inonetsa kutaura nezvayo kana pachitariswa pamutemo
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Va Arthur Mutambara, vatsigira neChitatu kudzingwa munyika kwakaitwa mumiriri weLibya, VaTaher Elmagrahi, nehurumende nemusi weChipiri.
VaElmagrahi vakabuda pachena kuti vava kutsigira National Transitional Council, kana kuti TNC yekunyika kwavo iyo inonzi ndiyo yakafanobata matomu pari zvino.
VaMutambara vati hurumende yakatora danho iri nekuti Zimbabwe haisati yave kucherechedza TNC sehurumende.
Vachipindura mibvunzo muparamende, VaMutambara vati vakazvitsikira tambo yebutsu apo vakati havachacherechedzi Va Muammar Gadhafi semutungamiri weLibya. VaMutambara vaudza nhengo dzeparamende kuti kana NTC yava kuda kudzidyana neZimbabwe, mapato ose ari muhurumende anofanirwa kuwirirana panyaya iyi, kusanganisirawo dare reparamende.
Gurukota rezvemaindasitiri, Va Welshman Ncube, vati nyaya yemumiriri weLibya inonetsa kutaura nezvayo kana pachitariswa pamutemo.
VaNcube vati pakaiswa nyaya iyi mudare remakurukota neChipiri, pakanga pasina mukana wekuti vanhu vapokane nekuti chaidiwa apa kwaiva kutevedzera zvinhu sezvinodiwa nemitemo inobata kudyidzana kwenyika.
VaNcube vati mumiriri weLibya akakurumidza kumedza zvinhu zvichiri kupisa, izvo zvakapa kuti gurukota rezvekunze kwenyika, VaSimbarashe Mumbengegwi, vagutse dare remakurukota kuti mumiriri weLibya akanga atyora mitemo yakaita kuti agadzwe semumiriri weLibya muZimbabwe.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemitemo, Va Obert Gutu, vanoti havawirirane nedanho rakatorwa pakudzingwa kwemumiriri weLibya muZimbabwe vachiti VaGadhafi havasisiri kutonga Libya.